I-Ellicott Series 470 Super Dragon® Dredge - I-Dermge Enkulu Ye-Cutter Suction
I-4170 Super Dragon ™ dredge ifakwe ngezinjini ezimbili ze-onboard zokusebenzisa amandla amaphampu we-dredge kanye nezinhlelo ezisizayo ze-hydraulic. Lesi sakhiwo esikhulu sokusika esinezinduna sinomshini wokusebenzisa amanzi ovulekile kanye ne-envisitive control console kanye nomklamo omibili, osindayo wokusebenza ezindleleni zamanzi asogwini.
Usayizi wokukhipha: I-27 ″ x 24 ″ (700 mm x 600 mm)
Injini eyinhloko: I-2,680 HP (2,000 kW)
Injini Esizayo: I-1,410 HP (1,051 kW)
I-Power @ Cutter Drayivu: I-750 HP (550 kW)
Ubunzulu bokuDonswa Okuphezulu: I-58 ′ (17.7 m)
• Swing amahange
• Iphampu yokulungisa impompo ngogesi
• Ukurekhoda igeji ukuze ishelwe nokukhipha
• I-Anchor isingatha ama-booms ngama-winches ama-swing anchors
• Izinketho ezingeziwe ziyatholakala ngesicelo
I-4170 DREDGE ADVANTAGES
• Ibafanela kahle osonkontileka abasunguliwe.
• Itholakala njengengxenye yokwakha umkhumbi noma eyokuhambisa ngokuhamba ngamaloli.
• Ukutshala imali okunokwethenjelwa kokusebenzisa isikhathi eside.
• Kwakhelwe amaphrojekthi amakhulu wezithuthi ezisindayo njengemifula, amachweba, amachweba, kanye namaphrojekthi wokuvuselela umhlaba.